उपत्यका भित्रिने यात्रु बढेReeshav Sarkar
दसैं मनाएर काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने यात्रुको संख्यामा वृद्धि भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार असोज २३ गते घटस्थापनादेखि अष्टमीसम्म दसैं मनाउन घर गएका यात्रु दसैंको टीका लगाएर उपत्यका भित्रन थालेका हुन् । महाशाखाका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न नाकाबाट दैनिक एक लाखभन्दा बढी यात्रु भित्रिन थालेका हुन्। उपत्यकाको थानकोट, जगाती, दक्षिणकाली र बालाजु नाका हुँदै यात्रु भित्रिएका हुन्।
अझै नअाउने भए महानगरका ब्रुमरreeshav
मंसिरको पहिलोसाताबाट राजधानी काठमाडौ सडकमा थप पाँच ब्रुमर लगाएर सफा बनाउने काठमाडौ महानगरपालिकाको योजना विफल भएको छ। अघिल्लो वैशाखमा जनप्रतिनिधि आएपछि पहिलो प्राथमिकतामा परेको कामपाको सडकको धूलो सफा गर्न उक्त यन्त्र ल्याउन लागिएको थियो तर केही प्रक्रिया बाँकी रहेको भन्दै फागुनको पहिलो सातादेखि मात्र उक्त यन्त्रको प्रयोग गर्न सकिने कामपाले जनाएको छ ।
लाइसेन्सको आवेदन अब छठपछि मात्र खुलाइनेAnusha
दशैंअघिदेखि बन्द रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को आवेदन अब छठपछि मात्र खुल्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले दशैँको बिदालाई मध्यनजर गरी सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन फारम, ट्रायल र रिट्रायल बन्द गरेको थियो ।
पाकिस्तानमा फेरि भारतीय च्यानल प्रशारणमा प्रतिवन्धMakalu
पाकिस्तानको सर्वाेच्च अदालतले भारतीय टिभी च्यानल माथि प्रतिवन्ध लगाएको छ । यसअघि तल्लो अदालतले हटाएको प्रतिवन्धसर्वाेच्च पुन: लगाएको हो । भारतले पाकिस्तान तर्फ बग्ने नदीमा ड्याम बनाएपछि जवाफमा पाकिस्तानले टिभी च्यानल प्रशारणमा नै प्रतिवन्ध लगाएको हो । पाकिस्तानमा भारतीय टिभी च्यानल र फिल्म लोकप्रिय छन् । नदीमा ड्यामको प्रयोग गर्दै भारतले तनाव बढाएको आरोप पाकिस्तानको छ ।भारत हुँदै बग्ने सिन्धु र उसका सहायक नदीमा पाकिस्तानको ८० प्रतिशत सिचाई निर्भर छ ।
घुस लिएको ८० हजार गन्दा गन्दै सरकारी वकिल पक्राउreeshav
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलालाई मङ्गलबार सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । मङ्गलबार बिहान ११ बजे सरकारी वकिलको कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग ८० हजार रुपैयाँ लिएर गनिरहेका बेला सेवाग्राहीको सूचनाका आधारमा पुगेको आयोगको टोलीले उहाँलाई पक्राउ गरेको हो ।
फारम भर्ने समयावधि पुनः थपGorkhali
त्रिविले ४४ औं दीक्षान्त समारोहका लागि फारम भर्ने समय सीमा थप गरेको छ । त्रिविले अनलाइनको फारमा भर्ने अवधि २०७५ कात्तिक ७ गतेसम्म तोकिको थियो ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको नयाँ रुपMakalu
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको नाम सुन्दा धेरैको मनमा धुलो, खाल्डो, जाम र ज्यानै लिने पहिरोको त्रासको नमिठो सम्झनाको आँधी हुरी नै चल्छ । काठमाडौं भित्रिने देशको यो मुख्य सडकमा दिनहुँ १० औं हजार गाडी ओहरदोहर गर्छन् । यो सडकलाई फराकिलो बनाउने काम सुरु भएपछि बेहोर्नु परेको अस्तव्यस्तताले धेरै यात्रुलाई पिरल्यो । तर यो पिर व्यथा अब बिगत भएको छ ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई बुथमा लिएर जाने कि ?Reeshav Sarkar
शिशु जन्मेको ६ महिना पुग्यो ? अथवा पाँच वर्षमुनिको छ ? छ भने भोलि पायक पर्ने ‘बुथ’ मा लिएर जाने तयारी गर्नुहोला । मतदान गर्न होइन नि बुथमा ! आफ्ना शिशुलाई स्वस्थ बनाउन एकै पटक चार सेवा भिटामिन ए, जुकाको औषधि (अल्वेन्डाजोल), पाखुराको नाप र बालभिटा प्राप्त गर्न । यसका लागि देशभर ३६ हजार बुथमा ६० हजार स्वयम्सेविका-स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।
वीर अस्पतालका डाक्टरको राजीनामा पत्र : चाकरी र घुस रकम पुर्‍याउन सकिनreeshav
वीर अस्पतालका न्युरो सर्जन डा ध्रुवराज अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। उनले आफ्नो राजीनामा पत्रमा चाकडी र घुस दिन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका अधिकारीको राजीनामा पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। 'पूर्वाग्रह साथ दु:ख दिएको र चाकडि र घुस समेत डिमाण्ड अनुसार दिन असक्षम हुँदा राजीनामा दिएको छु' उनको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ।
नाइटक्लबको शौचालयमा हिन्दू देवीदेवताका चित्रRoshan
अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित 'हाउस अफ एस' नामक नाइटक्लबमा हिन्दू देवीदेवताका चित्रहरू राखिएको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक भएको छ। ती चित्रप्रति अमेरिकाको ओहायो राज्यमा बस्ने भारतीय मूलकी एक अमेरिकी महिला अंकिता मिश्राले आपत्ति जनाएकी हुन्। मिश्राले आफ्नो इन्स्टाग्राम पोस्ट र ब्लगमा यस विषयमा लेखेकी छन्।
नेपाली महिला तस्करीको नयाँ मार्ग, दिल्लीको सट्टा अब मणिपुरNeelam
भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुर हुँदै अवैध रूपमा विभिन्न मुलुक जाँदै गरेका 'एक सय भन्दा बढी' नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको उद्धारकर्ताहरूले बताएका छन्। घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई लैजान प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुकहरूमा उनीहरू जान लागेको आशङ्का गरिएको छ।
सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुँदै मुटुरोगीAnusha
उपचारका लागि भेरी अञ्चल अस्पतालमा आएका मुटुका बिरामी राज्यले दिने सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले कार्डियोलोजी विभागलाई सूचीकृत गर्न ढिलाइ गरेका कारण साविक मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका सयौँ मुटुरोगी सरकारी सेवाबाट वञ्चित भएका हुन् । मुटुरोगका बिरामीलाई एक लाखसम्मको उपचारमा सहयोग गर्ने नीति राज्यको छ तर संस्था सूचीकृत नहुँदा उपचारका लागि भेरी अञ्चल अस्पतालमा आउने मुटुरोगका बिरामीले उक्त सेवा पाउन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।संस्था सूचीकृतका लागि भेरी अञ्चल अस्पतालले तीन महिनाअघि...पूरा अंश
बीबीसीको उत्प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाको सूचीमा उमादेवी वादीGorkhali
बीबीसीले सार्वजनिक गरेको विश्वका एक सय उत्प्रेरणादायी महिलाहरुको सूचीमा नेपालकी उमादेवी वादी समावेश भएकी छन्। एक सय जनाको सूचीमा ७ नम्बर प्रदेश सभाकी सदस्य समेत रहेकी वादी १० औं नम्बरमा छन्। उनी नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सासंद हुन्। सोमबार बीबीसीले सन् २०१८ मा उत्प्रेरणादयी र प्रभावशाली भूमिका खेलेका विश्वका महिलाहरुको सूची सार्वजनिक गरेको हो। वादी समुदायको उत्थानको लागि उनले काम गरेकी थिइन्। अछुत भनिएको वादी समुदायबारेको मानसिकता परिवर्तन गर्न काम गरेको भनेर बीबीसीले उनको बारे...पूरा अंश
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुखreeshav
छातीमा गम्भीर समस्या भएपछि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख भएको छ । डा. रत्नमान गजुरेल र डा. पारसको टीमले उनको उपचारमा संलग्न छन् । सोमबार बिहान करिब ४ बजे छातीमा तीव्र दुखाई महसुस भएपछि डा. केसीलाई त्रि. वि शिक्षण अस्पताल परिसरमै रहेको मनमोहन कार्डियोभास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएको थियो । उनलाई हाल सिसियूमै राखेर उपचार गरिएको छ ।
अमेरिकाः शिकागोस्थित अस्पतालमा चल्यो गोलीSandesh
संयुक्त राज्य अमेरिकाको शिकागोस्थित एउटा अस्पतालमा भएको गोलीकाण्डमा चारजनाको ज्यान गएको छ। मारिनेमा अस्पतालका दुई महिला कर्मचारी, एक प्रहरी अधिकारी र स्वयम्‌ बन्दुकधारी छन् । गोली हानाहानका क्रममा बन्दुकधारी मारिएको प्रहरीका प्रवक्ताले बताएका छन्। बन्दुकधारीले नै आफैँले आफ्नो ज्यान लिए वा नलिएको चाहिँ प्रस्ट हुन सकेको छैन।
हुसेन हत्याको आशंकामा ६ भारतीय पक्राउRoshan
सुनसरीमा ‘मर्निङ वाक’ मा निस्किएका जय बाबा इँटा उद्योगका सुपरभाइजर ५४ वर्षीय मोहम्मद फिदा हुसेनको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा ६ भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका सबै भारतीय मूलका र जय बाबा इँटा उद्योगकै कामदार र सक्युरिटी गार्ड रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
आँधीका कारण भारतमा ३३ जनाको मृत्युRoshan
भारतको पूर्वी क्षेत्रमा आएको भएको छ। प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्धी निकायका उच्च अधिकारीहरुले शक्तिशाली आँधीका कारण अरु पनि धेरै क्षति भएको आइतबार जानकारी दिएका छन्। ‘साइक्लोन गाजा’ नाम दिइएको सो आँधी प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको गतिमा आएको समाचारमा जनाइएको छ। आँधी तमिलनाडु राज्यमा शुक्रबार आएको हो। आँधीले हजारौँ रुखहरु भाँचिएका छन् भने ठूलो संख्यामा घरहरु भत्किएका छन्। घरबारविहिन भएका हजारौ स्थानीय बासिन्दालाई...पूरा अंश
कौशलटार–जडिबुटी चोक पार गर्न डेढ घण्टाAyush
सात वर्षअघि कोटेश्वर–सूर्यविनायक ६ लेनको सडक विस्तार भयो । सडक विस्तार भएसँगै धेरैले सोचेका थिए–अबचाहिँ कोटेश्वर र जडीबुटीको जाम घट्ने भयो । हुन पनि केही समय त त्यस्तै नै भयो । ६ लेनको चिल्लो सडकमा सरर गाडी गुड्थे । जामको त कुनै गुन्जायस नै हुँदैन्थ्यो। सडकमा चार लेन हाइस्पिड लेन र दुई लेन सर्भिस लेन तथा तीन मिटरको बगैँचा सहितको ‘मेडियन’ बनाइयो । सडकमा सवारी जाम हुँदैनथ्यो । उक्त सडक हेर्नेकै लागि पनि सर्वसाधारणको ओइरो लाग्थ्यो। जापान सरकारको सहयोगमा २०६५ सालमा सडक...पूरा अंश
पोखरा विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्यका विद्यार्थीद्वारा तालाबन्दीSandesh
पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्कुल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्समा एमपीएच (जनस्वास्थ्य) अध्ययनरत विद्यार्थीले मंगलबार विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । विभिन्न माग राख्दै सोमबार विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य विज्ञान संकायको डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका उनीहरुले मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा नै तालाबन्दी गरेका हुन् । डीन कार्यालयले आफूहरुले लगाएको ताला तोडेको भन्दै उनीहरुले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा नै तालाबन्दी गरेको बताएका छन् ।
‘यमन विश्वकै सबभन्दा ठूलो भोकमरीको जोखिममा’Anusha
साउदी अरेबिया-नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले मानवीय सहायता सामाग्रीको आपूर्तिमा लगाइएको नाकाबन्दी नहटाए विश्वले दशकौं यता नदेखेको सबभन्दा ठूलो भोकमरी यमनले भोग्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायता प्रमुखले चेतावनी दिएका छन्। मानवीय सहायता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको निकायका प्रमुख मार्क लोककले दशौं लाख मानिसहरु भोकमरीको जोखिममा रहेको बताएका छन्। बन्दसत्रको बैठकपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले नाकाबन्दी अन्त्य गर्न माग गरेको छ। साउदी अरेबियाको राजधानी रियादलाई निशाना...पूरा अंश